रमेश उप्रेतीको धमाकेदार ‘कम ब्याक’ [हेरौँ हल रिपोर्ट सहित] – Complete Nepali News Portal
सुन्न साथ नाचौ नाचौ लाग्ने लाइभ दोहोरि (भिडियो सहित)
मोडल सरिश्मा मगर भन्छिन लाउरे पाए झ्याप्पै दिन्छु (भिडीयो सहित)
प्रहरी रहस्य ः भारतमा पक्राउ परेका भनिएका मनोज पुन कसरी इन्काउन्टरमा मारिए ? (भिडियो)
आजको राशिफल (२०७४ फाल्गुन ०९ गते/२०१८ फेब्रुवरी २१)
सिधा कुरा टिम रबिकै नाममा डेढ लाखको ठगि: देशद्रोहीहरुलाई नठोकेसम्म देशको समृद्धी आकाशको फल मात्रै हो
रमेश उप्रेतीको धमाकेदार ‘कम ब्याक’ [हेरौँ हल रिपोर्ट सहित]
October 31, 2017	455 Views
नेपाली सिने क्षेत्रमा चलचित्र प्रदर्शनमा आउनु पूर्व नै उसको चर्चा ब्यापक हुने गरेका उदाहरण थुप्रै छन् । प्रदर्शनमा आाउनु पूर्वनै चलचित्रका अनेकन पक्षलाई उठान गरेर केहि न केहि नयाँपन दिन खोजिन्छ र प्रदर्शनमा आउनु पूर्वनै दर्शकका लागि उक्त चलचित्र निकै प्रतिक्षाको घडी बनिदिन्छ । यस्तै मध्यको एक चलचित्र हो विहिवार देखि रिलिज भएको ऐश्वर्य । रमेश उप्रेतीको ‘कम ब्याक’ दर्शकका लागि मुख्य रहस्य बनेको यो चलचित्रले पनि प्रदर्शनमा आउनु पूवै उत्तिकं हंगामा पिट्यो । लामो समय सम्म रजतपटबाट पाखा लागेका रमेश उप्रेतीको कमब्याक उनका पुराना फ्यानहरुका लागि निकै उत्सुकताको बिषय बन्न पुग्यो । त्यसोत, यो चलचित्रमा समाबेश भएको गीतले पनि चलचित्रको चर्चामा मलजल गरेकै हो । भने उच्च प्रविधीको प्रयोग गरिएको भनेर चलाईएको चर्चाले पनि दर्शकहरुलाई उत्सुकता थपिदियो ।
रमेश उप्रेतीको प्रस्तुती रहेको यो चलचित्रमा रमेशसंगै दिपीका प्रसाईको प्रस्तुतीलाई दर्शकले ‘उत्कृष्ट’ जोडिका रुपमा पाएका छन् । प्रशान्त ताम्राकारको खलनायकको भुमिकालाई दर्शकहरुले उत्तिकै उच्च मार्किङ गरिदिएका छन् भने केकी अधिकारीको प्रस्तुतीले पनि दर्शकहरुका लागि निकै चाख पूर्ण र रमाईलो बनाईदिएको छ । दिवाकर भट्राईको लेखन तथा निर्देशन रहेको ऐश्वर्यको निर्माण अर्जन श्रेष्ठ र किरण राना उप्रेतीले गरेका हुन् । चलचित्र वैश्णेदेबी फिल्मको ब्यानारमा निर्माण भएको हो ।
रमेश उप्रेतीको बेजोड ‘कमब्याक’को अपेक्षामा रहेका दर्शकहरुलाई रमेश उप्रेतीको ‘कम ब्याक’ कत्तिको चित्त बुझ्यो । यानीकी नेपाली चलचित्रमा उनको पुनरागमन धमाकेदार बन्न सक्यो वा सकेन ? हामीले यो जान्न खोजेका छौँ । घोराही स्थित गणेश चित्रालयमा चित्रालयमा पुगेर दर्शकहरुको प्रतिकृया लिएका छौँ ।
हेरौँ हल रिपोर्ट ।
ज्योति मगरको प्रस्तुतिमा सुर्खेतमा घट्यो कण्डम कान्ड, सुरक्षा कर्मिलाइ समाल्न हम्मे हम्मे ।(भिडियो सहित)
March 3, 2017	188,242
April 28, 2017	115,567
February 26, 2017	113,694
January 9, 2017	112,650
April 26, 2017	104,510
March 24, 2017	103,902
March 21, 2017	103,467
April 19, 2017	96,254
January 24, 2017	94,048
April 17, 2017	90,194